Home Wararka Al Shabaab oo sheegatay masuuliyada dilka masuul katirsan dowladda Kenya
Al Shabaab oo sheegatay masuuliyada dilka masuul katirsan dowladda Kenya
Dagaalyahano katirsan Al Shabaab ayaa weerar ka fuliyay deegaan hoos taga magaalada Mandheera ee gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya, waxa ayna weerarkaasi ku dileen masuul katirsan deegaan hoostaga magaaladaasi.
Weerarkan ka dhacay duleedka magaalada Mandheera ayaa lagu dilay Guddoomiye ku xigeenkii tuulada Cumar Jilacow ee bariga ismaamulka Mandera ee dalka Kenya Maxamad Cabdi Axmad (Jaak).
Goobjoogayaal ayaa ku waramay in dabley hubeesan weerar gaadmo ah ku dileen Guddoomiye kuxigeenka xilli uu ku sugnaa duleedka deegaanka Cumar Jilacow, waxaan agoobta ka baxsaday kooxdoo dilka u geesatay. Ciidamo katirsan booliiska dalka Kenya ayaa howlgalo baaritaan ah ka sameeyay deegaanka dilku ka dhacay, lamana sheegin in ciidamada booliiska dad usoo qabteen dilka masuulkan.
Al Shabaab ayaa sheegatay masuuliyada dilkan loo geestay Guddoomiye ku xigeenkii tuulada Cumar Jilacow , waxa ayna Al Shabaab cadeeyeen in ay beegsanayaan cid kasto oo katirsan maamulka Kenya.
Previous article[DAAWO] Doorashada kursiga Fahad Yaasiin oo la dalbaday in Muqdisho lagu qabto
Next articleFarmaajo oo bilaabay inuu sameeyo balanqaadyo been abuur ah oo la xiriira Mushaarka, Gunnada & Raashinka Ciidanka Booliiska
Musharax Deni oo si farsameysan hawada uga saaray Midowga Musharaxiinta. “Wado...
18 Maajo oo si heer sare ah looga xusay Somaliand (Sawiro-Daawo...